के. आई सिंह पुलमुनि दुई 'भ्यालेन्टाइन' - विविधा - कान्तिपुर समाचार
के. आई सिंह पुलमुनि दुई 'भ्यालेन्टाइन'
फाल्गुन २, २०७३ सावित्री गौतम
काठमाडौं — परिवारको ‘मर्जी’ विपरीत उनीहरु एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् । यिनीहरुबाटै आफ्नो प्रेमलाई बचाएर ट्रक चढेर भाग्छन् कुनै टाढाको गाउँमा । त्यहीँको नदी किनारमा एउटा सुन्दर ‘कटेज’ बनाएर बस्छन् । अस्तिको प्रेमी यानिकी आजको लोग्नेचाहिँ कमाउन जान्छ । अस्तिकी प्रेमिका यानिकी आजकी स्वास्नीचाहिँ घरमा उसलाई कुरेर बस्छे । कामबाट आउँदा मिठो मुस्कानले स्वागत गर्छे । घरबाट भाग्ने, नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बस्ने, केटा बञ्चरो बोकेर बाहिरिने, केटी कुरेर बस्ने, साँझ मुस्कानले स्वागत गर्ने ।
परिवारको ‘मर्जी’ विपरीत उनीहरु एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् । यिनीहरुबाटै आफ्नो प्रेमलाई बचाएर ट्रक चढेर भाग्छन् कुनै टाढाको गाउँमा । त्यहीँको नदी किनारमा एउटा सुन्दर ‘कटेज’ बनाएर बस्छन् ।
अस्तिको प्रेमी यानिकी आजको लोग्नेचाहिँ कमाउन जान्छ । अस्तिकी प्रेमिका यानिकी आजकी स्वास्नीचाहिँ घरमा उसलाई कुरेर बस्छे । कामबाट आउँदा मिठो मुस्कानले स्वागत गर्छे । घरबाट भाग्ने, नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बस्ने, केटा बञ्चरो बोकेर बाहिरिने, केटी कुरेर बस्ने, साँझ मुस्कानले स्वागत गर्ने । सिनेमाहरुमा यति रुमानी र आकर्षक तरिकाले देखाइन्छ यी दृश्यहरु कि लाग्छ उनीहरुलाई जीवनभर अन्य भौतिक आवश्यकता पर्ने नै छैन ।
२०४९ सालमा पोखराको के.आई सिंह पुलमुनि छाप्रो बनाएर बस्न सुरु गर्दा नरबहादुर दर्जी र जैसरा मगरको जिन्दगी पनि कुनै प्रेमकथामा आधारित फिल्मका नायक-नायिकाको भन्दा कम पक्कै नहुँदो हो । दिनभरि काम गर्न जाने नरबहादुरलाई छाप्रोमा कुरेर बस्दी हुन् जैसरा । चिच्याएर बग्ने सेती नदी कम्तीमा ५० फिट तल छ उनीहरुको छाप्रोबाट । तर त्यतिबेला आफ्नो प्रेमको मधुर ध्वनिको अगाडि कतै बिलाएजस्तो लाग्दो हो उनीहरुलाई सातो जाने गरी चिच्याएर बग्ने सेतीको गडगडाहट पनि ।
विस्तारै उनीहरुले छाप्रो वरिपरिको खाली जमिनमा मौसमी तरकारी, फलफूल र बोटबिरुवा लगाएर हरियाली बनाए । सन्तान भएनन् । कहिले घर बनाउने सिकर्मी त कहिले काठको काम गर्ने डकर्मीको काम गर्दै आएका नरबहादुर अहिले ७७ वर्ष पुगे । आँखा देख्न छाडेपछि अहिले उनी ती काम गर्न सक्दैनन् । ८३ वर्षकी जैसरा अझै पनि छरछिमेकमा भाँडा माझ्ने काम गरेर बिहान बेलुकाको अन्नको जोहो गर्छिन् । कहिलेकाहीं शरीरका सबै हाड दुखेर उठ्नै नसक्ने हुन्छिन् तर पनि घरघरका जुठाभाँडा नमाझे भरे पतिपत्नीले नै हात जुठो गर्न पाइने छैन भन्ने उनलाई थाहा छ ।
बुढ्यौली, बेरोजगारी, भोक, अभाव र रोगबीच भएपनि प्रेमको रथ घिसारिरहेको यो जोडीमाथि अचानक बज्रपात आइपर्‍यो २०७३ साल पुस २५ गते । स्थानीय टोलसुधार समितिका पदाधिकारी उनीहरुको छाप्रोमा आइपुगे । ‘यहाँ फोहर भयो अब हामी पार्क बनाउँछौ’ भन्दै ।
पुलकै पारिपट्टिको सेती नदीको सरकारी सुरुङमा पनि एक नीजि कम्पनीले बार लगाएर ‘कारोबार’ गरिहेको छ । सरकारी योजनाको सुरुङ हेर्न सर्वसाधारण टिकट काटेर छिर्नुपर्छ । अब वारिपट्टि पनि बार लगाएर आयआर्जन गर्ने टोल विकासको योजना छ । सरसफाइ कार्यक्रमकै बहानामा उनीहरुले दर्जी दम्पतिले रोपेका बिरुवा काटिदिए, लसुन-प्याज र अरु तरकारी बारी फाँडिदिए, फलेका केराका चार पाँचवटा थम्बा ढालिदिए । कोहीले त ‘तिमीहरु छोडेर जाओ, नत्र डोजर लगाएर छाप्रो भत्काइदिन्छौं’ भनेर धम्की दिए । ‘टोलभरिका दुखी गरीब र मगन्तेहरुको ठेक्का टोल विकासले किन लिने’ समेत भनेर गए । समाजले निर्माण गरेको उमेर, जात र वर्ग मिलाएर गर्नुपर्ने ‘प्रेम’को परम्परागत ‘फ्रेम’ वर्षौंअघि भत्काउने हिम्मत गरेका जैसरा र नरबहादुरको हिम्मत यतिखेर नराम्ररी भत्किएको छ । कुनबेला टोलबासी आउँछन् र छाप्रो भत्काइदिन्छन् भन्ने त्रासमै यतिखेर दुइजना आतंकित छन् ।
टोल विकासले उनीहरुलाई धम्क्याउने मुख्य आधार हो नदीकिनारको ५० मिटर आसपास कुनै निर्माण गर्न नपाउने सरकारी मापदण्डको नियम । नजिकै अर्को पक्की घर पनि छ । त्यो पनि उही ५० मिटरको मापदण्डभित्रै पर्दछ । छाप्राबासी बृद्ध दम्पतिलाई डोजर लगाएर भगाउने धम्की दिएका टोलबासी उक्त पक्की घरबारे भने मौन छन् । के.आइ. सिंह पुलकै स्थानीय आशिमा थापा एकजना छन् जसले उनीहरुलाई यो सबैमा खुलेर सहयोग गरिरहेकी छन् । ‘अशक्त बृद्धबृद्धालाई उठीबास लगाउन हुँदैन’ भन्नेमा टोलकै अरु दुईचारजना पनि सहमत छन् तर अगाडि आएर भन्न सक्दैनन् ।
आशिमा कुनै अधिवक्ता, अभियन्ता वा अधिकारमुखी गैरसरकारी संस्थाकी कारिन्दा होइनन् । गृहिणी हुन् । श्रीमान पोखराबाहिर काम गर्छन् । स्कुल पढ्ने छोरी र बृद्ध ससुराको साथमा उनी पोखरामा बस्छिन् । उनका रोगी ससुराको हातमा पिसाबको थैलो छ, नजिकै कोपरासहितको कुर्सी छ । नरबहादुर र जैसरालाई वर्षौंअघिदेखि चिन्ने उनले मानवीय संवेदनाका आधारमा मात्रै उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेकी छन् । आशिमाका अनुसार २०५२ सालमै ‘खोला किनारमा नबस’ भनेर पोखरा नगर परियोजना कार्यान्वयन समितिले पत्र काटेको पनि रहेछ । तर परियोजनाकै तत्कालीन कर्मचारी ओमबहादुर केसीले ‘घर नभएका विचराहरु’ भनेर त्यही ठाउँमा बसिराख्ने मौखिक अनुमति दिएको आशिमा बताउँछिन् । त्यही मौखिक अनुमतिलाई नै सर्वोपरी ठानेर नरबहादुर र जैसरा छाप्रोमा बसिराखे । सुकुम्बासी परिचयपत्रजस्ता प्रक्रियाका लागि उनीहरुले कोशिसै गरेनन् ।
यतिखेर टोलविकासले उठीबास लगाउन आँटे भनेर नरबहादुर र जैसरा आफ्नै सामू रोएको देखेपछि ‘न्याय पाउँ’ भनेर उनीहरुको तर्फबाट आशिमाले नगरपालिकामा निवेदन पेश गरिदिइन् । ‘पुलमुनि बसेकालाई अनावश्यक दु:ख नदिनु’ भनेर नगरपालिकाले टोल विकासलाई पत्र लेखिदियो । त्यसपछि टोलविकासले उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने र पार्क बनाउने भनेर आशिमा र दर्जी दम्पतिसँग मौखिक सहमति गरे ।
‘म विकासविरोधी होइन’ भन्दै आशिमाले सहमति जनाइन् । तर आशिमा त्यतिबेला जिल खाइन् जब उनीहरुका लागि टोलविकासले ‘सुरक्षित’ भनेर बनाइदिएको ब्लकको टहरो पोखरा बजारका लागि पुलबाटै ल्याइएको पानीका दुइवटा ठूल्ठूला पाइपमाथि अड्याएर बनाइएको देखिन् । कैयौंपटक बर्खामा ती पाइप फुटेको देखेका दर्जी दम्पतिलाई डर छ-अबको बर्खामा त्यसैगरी उनीहरुका लागि बनाइएको घरभित्रै पाइप फुट्यो भने बगेर उनीहरु सेतीमा यसरी मिसिने छन्, हाडखोर पनि भेटिने छैन । मापदण्ड मिचेर बसेको गल्तीबापत त्यहाँबाट हट्न उनीहरु तयार छन् । तर उनीहरुको एउटै प्रश्न छ, ‘हामीलाई लाग्ने कानून पक्की घरकालाई चाहिं किन नलाग्ने ?’
आशिमाका अनुसार नगरपालिकाका वातावरण शाखाका कर्मचारीले उनीहरुलाई ‘अहिले पार्क बन्दैन नआत्तिनुस, हामीले टोलबासीलाई बनाउन सुरु गर भनेकै छैनौं’ भनेर आश्वासन दिएका छन् । तर टोलविकासले त्यहाँ धमाधम ढुंगा बोकाएर पर्खाल लगाउन सुरु गरिसकेको छ । आफ्नो छानोमुनिबाटै बडाबडा ढुंगा बोकेर कामदारहरु हिंडेको देख्दा आतंकित बनेका दर्जी दम्पति राम्ररी उभिन पनि नमिल्ने र बत्ती नभएको छाप्रोमा कोचिएर सुत्छन् । कोही भेट्न गए ‘सन्चो नभएर सुतेको’ भन्छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी, दलित सांसद वा दलित सिडिओ सबैलाई अनुरोध गरेर आशिमा थाकिसकेकी छन् । जब यी दलित दम्पतिको हालतबारे बताउँदै गर्दा आत्तिएर उनी रुनरुन खोज्छिन् तब मेरो पनि घाँटीमा किक्लिक्क अड्किन्छ ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ भन्ने नारा । बारम्बारको व्यवस्था परिवर्तन र युगौंको पर्खाइपछि अब कम्तीमा निमुखाहरुलाई समाज सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढ्दैछ भनेर कम्तीमा अनूभूतिसम्म त हुन पाउनुपर्ने हो ।
देशैभरि कुनै खोलाको किनार वा चौर जस्ता सार्वजनिक ठाउँलाई कुनै टोलविशेषमा अवस्थित क्लब, समूह वा नीजि ठेकेदार कम्पनीहरुले बार लगाउने र शुल्क लिने गरेको देख्न पाइन्छ । चौतारीमा सुस्ताउन, चौरमा पल्टिन वा खोला किनारमा बिसाइ फेर्नका लागि पनि दिनहुँ शुल्क तिर्न चाहने वा सक्ने नागरिक हुन्छन् कि हुँदैनन्, यसरी सार्वजनिक ठाउँलाई सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर राख्न पाइने कि नपाइने, ती ठाउँमा निर्बाध हिँड्डुल गर्ने वा उपयोग गर्ने सर्वसाधारणको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको मानिने कि नमानिने भनेर नै बहस गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । एक त हिजोसम्म उभिएर खोला हेरिरहेको डिलमा आजबाट कसैले फलामे बार लगाइकन पैसा तिरेर मात्र हेर्न पाउने बनाइएको हुन्छ ।
दोस्रो सम्बन्धित संस्थाहरुले ती ठाउँहरुमा कहिलेकाहीं महिनौं तालासमेत लगाइदिन्छन् । र, पैसै तिरेर भएपति सर्वसाधारण खुला ठाउँमा निस्कनबाट बञ्चित बन्छन् । के. आइ सिंह पुलका दर्जी दम्पतिले छाप्रोको वरिपरि मौसमी तरकारी, केरा र अन्य फलफूल लगाएर एक प्रकारले पार्क नै बनाएका थिए । भैरहेका बिरुवालाई फोहर भयो भनेर मास्नु र नजिकैको पक्की घरलाई केही नगर्नुमा टोलविकासलाई उही दर्जी दम्पतिको छाप्रो मात्रै ‘फोहर’ लागेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दर्जी दम्पतिको यो अवस्थालाई के ले सम्बोधन गर्छ, जेष्ठ नागरिक वा दलितसम्बन्धी कुन चाहिँ ऐन, नियम ,वा कानूनअन्तर्गत उनीहरु संरक्षित छन्, यो कुरा ससुरा र छोरीको स्याहारमा रातोदिन ब्यस्त आशिमा थापालाई थाहा छैन । उनलाई ८० नाघेका असक्त र बेसहारा बृद्धबृद्धालाई सरकारी नियम वा सरसफाइको कारण देखाएर सेतीमा खसेर मर्न दिनुहुँदैन भन्नेसम्म चाहिँ थाहा छ ।
भ्यालेन्टाइन्स डे को चहलपहल छ । गुलाफ दिवस, प्रस्ताव दिवस, चकलेट दिवस, टेडी दिवस हुँदै भ्यालेन्टाइन्स सप्ताह समापनको संघारमा आइपुगेको छ । कविहरुले राता कपडा लगाएर, हातहातमा गुलाफ समातेर प्रेमका कविता वाचन गरेका छन् । रेडियो, टिभी र रेष्टुरेन्ट समेतले भ्यालेन्टाइन्स विशेष गजल वाचन, भ्यालेन्टाइन्स डिनर खाने जोडी आदि प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका छन् ।
राताम्य प्रेमोपहारले उपहार पसल र चकलेट वा गुलाब समातेका युवकयुवतीका फोटोले सामाजिक सन्जाल रंगिएका छन् । तर यो त्यही देश हो जहाँ अझै पनि प्रेम वर्जित छ र प्रेमका उपहारको बिक्री भने विशेष छुटमा हुन्छ । यदि समाजमा निशर्त प्रेम स्वीकार्य हुँदो हो त कथित माथिल्लो जातिकी युवतीसँग प्रेम गरेकै ‘अपराध’मा काभ्रेका १८ वर्षीय अजीत मिजार गएको असारमा धादिङमा मृत फेला नपर्दा हुन् । आफूभन्दा बढी उमेरकी मगर्नी जैसरालाई लिएर गाउँबाट भागेका नरबहादुर दर्जी जीवनको उत्तरार्द्धमा ओतबिहीन हुने अवस्थामा नआइपुग्दा हुन् । नेपाल प्रहरीका ‘सेलिब्रिटी’ अफिसरहरु भ्यालेन्टाइन्स स्पेसल अपरेसन सञ्चालन गरेर कतिजना प्रेमी जोडीलाई लछारपछार गर्दै पक्राउ गर्‍यौं भनेर कीर्तिमान राख्ने होडबाजीमा नहुँदा हुन् । नेपाली समाजको ‘अघि बढाई’ एकांगी छ र यो अझै पनि विरोधाभासी मान्यताबाट ग्रसित छ भन्न डराउनुपर्ने केही कारण छैन ।
लुकिचोरी र जोखिमका साथमै भएपनि रोज डे, प्रमिस डे, किस डे जस्ता दिन पार गरिसकेर चौध फेब्रुअरीका दिन पार्कमा, मन्दिरका भित्तामा, होटेलका कोठाहरुमा र यस्तै पुलहरु मुनि भ्यालेन्टाइन्स डे उत्कर्षमा पुगिछाड्नेछ । यो दिनलाई के. आई सिंह पुलमुनि बसेको नरबहादुर र जैसराको भ्यालेन्टाइन्स जोडीले कसरी मनाउला ।
यतिका वर्ष सेतीको गहगडाहटलाई नै माथ गरेको उनीहरुको मुटुको प्रेम धुनलाई आज टोलविकासको धम्की र छाप्रोनजीकै उठिरहेको गाह्रोमा बज्रिरहने ढुंगाले विस्थापित गरिसकेका छन् । ‘प्रेमको महिना’ भनिने फेब्रुअरी महिनाभित्रमा फिल्मका नायक-नायिकाले झैं गरी वर्षौंअघि उनीहरुले प्रेमपूर्वक निर्माण गरेको पुलमुनिको ‘लभ कटेज’ कुन हालतमा पुग्ला ?
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ १४:३८
लेखनमा राजनीति : कति सफा, कति मैलो ?
लेखनमा कला भनेको के ? कति लिटर राजनीतिमा कति लिटर कला घोलेपछि त्यो साहित्य बन्छ ? अनि यो मात्रा ठिक्क भयो भनेर भनेर निर्धारण गर्नेचाहिं को ?
माघ २२, २०७३ सावित्री गौतम
‘लेखनका नाममा ‘राजनीति’ गर्न पाइँदैन । साहित्यका नाममा नारा ‘ओकल्न’ पाइँदैन । लेखनमा ‘कला’ हुनुपर्छ ।’ साहित्यिक सम्मेलन वा सामाजिक सञ्जालमा ‘गन्यमान्य’ हरूका यस्ता अभिव्यक्ति सुने/पढेपिच्छे मेरो दिमागको ढोका गोपालप्रसाद रिमालको यही कालजयी गीतले ढकढक्याउँछ ।
‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ
उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ...’
‘यो गीत थियो कि नारा ? यसले राजनीति गर्‍यो कि गरेन ? उनले यो गीत राजनीति नै गर्छु (आफ्नो दलविशेषको प्रचार गरौंला वा गीतकै बलमा कुनै सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्न पाउँला भनेर) भनेर लेखे वा यो उनको चेतनाबोधको समयसापेक्ष र स्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो ? अझ रिमाललाई ‘यसले राजनीति गर्नका लागि नारा लेखेको हो’ भनेर उनका समकालीन र अग्रजहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमै तेजोबध गरे वा गरेनन् होला ? विक्रम संवत् १९७७ मा ‘मकैको खेती’ लेखेका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले पनि उक्त किताब राजनीति गर्नका लागि लेखे वा किताबले आफैं राजनीति गर्‍यो ? आफूले अनुवाद गरेका वामपन्थी राजनीतिका किताबहरूकै ‘बदौलत’ नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन नै भए भन्ने लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको भनाइलाई के मान्ने ? किताब अनुवाद गरिदिएर अरूलाई राजनीति गर्न सघाउने उनको लेखन आफैंमा राजनीति थियो कि थिएन ?
‘गाउँगाउँबाट उठ बस्तीबस्तीबाट उठ’ भनेर देशभरि चेतनाका गीत गाउँदै घुम्ने राल्फा समूहका गीतले देशमा पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न विशिष्ट योगदान दिए । ती गीतहरू के थिए ? चिलीका कवि पाब्लो नेरुदा राजनीतिमा जति सक्रिय थिए, कवितामा उत्पीडितहरूका मुद्दा उठाउनमा त्योभन्दा बढी मुखर थिए । उदाहरणका लागि स्पेनी गृहयुद्ध, गार्सिया लोर्काको हत्या र स्पेनी जनतालाई विषय बनाएर नेरुदाले लेखेको ‘स्पेन इन द हार्ट’ लाई नारासंग्रह भन्ने कि कवितासंग्रह ? अरबको तेल राजनीतिबारे प्रश्न उठाउने असरफ फयादका कविता नारा थिए कि कविता ? उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको विरोधमा कविता लेखेकै भरमा मृत्युदण्ड नै रोक्न सफल संसारभरिका कविहरूले गरेको अभियान राजनीति थियो कि थिएन ? त्यति बेला फयादको पैरवी गरेर लेखिएका विश्वभरका कविका कविताहरू नारा थिए कि कविता ?
लेखनमा कला भनेको के ? कति लिटर राजनीतिमा कति लिटर कला घोलेपछि त्यो साहित्य बन्छ ? अनि यो मात्रा ठिक्क भयो भनेर भनेर निर्धारण गर्नेचाहिं को ? मेडिकल काउन्सिलजस्तै साहित्य काउन्सिल पनि हुन्छ कि जाँच लिने ? ‘उड्ने पन्छीजस्ता स्वतन्त्र हुन्छन्’ भनेर बारम्बार व्याख्या गरिइने कवि लेखकहरूको चारित्रिक विशेषता यो कला र राजनीतिको पारिभाषिक रस्सी तानातानमा कहाँनिर अटाउँछ ? अभिव्यक्तिका कुनै पनि शास्त्रीय परिधिमा कैद हुन नसक्ने साहित्यकारका अभिव्यक्तिलाई फेरि ‘लेखनका यति–यति शास्त्रीय मापदण्ड पालना गरेर लेखे मात्र तेरो यो चीज कला भयो नत्र राजनीति’ भनेर उनै शास्त्रीय मान्यता भत्काउँदै आएका अग्रजहरूले नै भन्नु त्यसो भए शास्त्रीयतातर्फकै ‘प्रतिगमन’ हो भनेर बुझ्न पाइने कि नपाइने ? कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ वा पेसागत संगठनसँग कहिल्यै आवद्धता रहेन । तर लेखन र राजनीतिबारे यी सबै कुरा मेरो दिमागले मलाई सोध्नै छोड्दैन ।
मैले बुझेको राजनीति
राजनीतिबारे पढिंदै सुनिंदै आएको अर्थ हो राज्यको नीति । राज्य चलाउने नीति भएकाले यसले सर्वश्रेष्ठ नीतिको दर्जा पाएको हुनुपर्छ । राज्यका बासिन्दाको जन्मदेखि जीवनयापन र मृत्युसम्मका सम्पूर्ण व्यवस्था, सुव्यवस्था र अव्यवस्था निर्धारण गर्ने प्रमुख प्रणाली नै यही भएकाले राजनीति सर्वश्रेष्ठ अर्थात् प्रमुख नीति हो । कुनै पनि राज्यको प्रचलित व्यवस्था आफैंमा राजनीति हो जसले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सञ्चालनका लागि नीति–नियमहरू बनाउँछ । मानवले जन्मनासाथ चुस्ने आमाको छातीदेखि मृत्युपश्चात् उसको दाहसंस्कारका लागि गरिने प्रबन्धसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया राजनीति अर्थात् देशको शासन व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ । कुनै विकट गाउँमा जन्मेको बच्चालाई पुग्ने गरी उसकी आमाको छातीबाट बग्ने दूधको धाराको अवस्था उसकी आमाको पोषणले निर्धारण गर्छ र यो पोषणको अवस्था निर्धारण गर्छ देशको राजनीतिले । त्यस्तै अरबमा जीवन गुमाएको कुनै कामदारको कुनै कामदारको दाहसंस्कार परिवारले समयमा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा उसको शव कति छिटो आइपुग्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ जुन देशको राजनीतिले निर्धारण गर्छ ।
राजनीति कुनै न कुनै वाद (‘इज्म’) हो । कुनै सिद्धान्त वा विचारको पालना गरेर फरक–फरक व्यक्तिहरू फरक–फरक जनसमूहको नेतृत्व गर्छन् । फरक–फरक चुनाव चिन्ह बनाउँछन् (लोकतन्त्रमा) । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्छन् र आफूले अँगालेको वादअनुसारको प्रणाली राज्यमा लागू गराउँछन् । जनसाधारणलाई त्यहीअनुसारको जीवनशैली पालना गर्न लगाउँछन् । राजनीति नामक सिक्काकै अर्को पाटो हो प्रचलित व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रश्न गर्ने काम । विश्वको इतिहासको हरेक कालखण्डमा समयक्रमसँगै प्रचलित व्यवस्थाको विरोध वा सुधारका माग गरिंदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनिवार्य मानिने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सर्वकालीन उपस्थितिले पनि ‘प्रश्न गर्ने काम, विरोध वा खबरदारी पनि राजनीतिकै अंग हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ । आधुनिक संसद्मा ‘प्रतिपक्ष’ उपाधिका साथ उभिएर प्रचलित व्यवस्था, शासक वा शासन प्रणालीमाथि निगरानी राख्ने, प्रश्न गर्ने र परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने विपक्षी दलहरूको हैसियत सत्ता सञ्चालकहरूकै बराबरको हुनु पनि यसको थप प्रमाण हो ।
पुनर्जागरणका लागि राजनीति
युरोपको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो पुनर्जागरण जो फ्रेन्च भाषामा ‘रेनेसा’ अर्थात् पुनर्जन्म नामले परिचित छ । समाजका स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिइनु वा ती मान्यताहरूमाथि प्रश्न गर्नु पनि राजनीति हो भन्ने कुराको सबैभन्दा दरिलो प्रमाण हो पुनर्जागरण । पुनर्जागरणकालीन युरोपमा सायदै कुनै यस्तो चेतनशील व्यक्ति बाँकी हुँदो हो जो राजनीति गर्नबाट अछुतो रहयो । स्थापित मध्ययुगीन मान्यता र संस्थाहरूप्रतिको घट्दो विश्वासले धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य र वास्तुकला, दर्शन र संगीतजस्ता सबै क्षेत्रमा जागरण र चेतनाको लहर उठयो । यति बेला मान्छेहरूमा आएको व्यक्तिगत चेतनाको विकासले मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । भौतिक विकासप्रति आकर्षण जगायो र युरोपलाई नयाँ–नयाँ आविष्कारतर्फ डोर्‍यायो । यही कालखण्डमा युरोपमा व्यापारको विकास भयो, प्रिन्टिङ प्रेस र सामुद्रिक कम्पासको खोज भयो ।
यो राजनीतिको बिँडो सबभन्दा पहिला कोपर्निकसले उठाए । दार्शनिक, वैज्ञानिक र गणितज्ञ र खगोलशास्त्रीसमेत रहेका कोपर्निकसले तत्कालीन ‘जियोसेन्ट्रिक’ भौगोलिक मान्यतालाई चुनौती दिए ‘सूर्यले पृथ्वीलाई होइन पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ’ भनेर । ‘पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ’ भनेर ठाउँ–ठाउँमा प्रवचन दिंदै हिंड्ने कोपर्निकसको बारम्बारको देशनिकालापछि अन्तत: हत्या नै भयो । कालान्तरमा टेलिस्कोपको आविष्कार गरेर ग्यालिलियोले कोपर्निकसको यही सिद्धान्तलाई प्रमाणित गरिदिए । यसर्थ प्रचलित स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न गरेर उनीहरूले वैज्ञानिक भईकन पनि राजनीति गरे । त्यसैगरी मार्टिन लुथरले परम्परागत मध्ययुगीन चर्चका शिक्षा र अभ्यासलाई चुनौती दिए जसले सिंगो क्रिस्चियन समुदायलाई नै ‘क्याथोलिक’ र ‘प्रोटेस्टेन्ट’ गरी दुई धारमा विभाजित गरिदियो । सेक्सपियरले आफ्ना कृतिहरूमा समकालीन र नि:सर्त प्रेमकथाहरूको वर्णनमार्फत ग्रीको–रोमन शास्त्रीय कथाहरूमा जेलिएको युरोपलाई त्यो जालोबाट मुक्ति दिलाए । लियोनार्दो दा भिन्ची, माइकलेन्जेलो, मेकियाभेली, जोन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लोजस्ता कवि, कलाकार र दार्शनिकको योगदान झिकिदिने हो भने सिंगो पुनर्जागरणको परिभाषा नै अपूरो हुन जान्छ ।
‘जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्दछन् कवि ।’ हाम्रै समाजमा प्रचलित यो उक्तिको पनि सीधा अर्थ हो रवि अर्थात् सूर्य नपुगेको ठाउँमा समेत कविहरू (उनीहरूको प्रसिद्धि वा विचार) पुगेका हुन्छन् । संसारका हरेका परिवर्तनका इतिहास अध्ययन गर्दा कवि लेखक र कलाकारको चेतना सधैं सर्वसाधारणको भन्दा सशक्त देखिन्छ । उनीहरूले सधैं प्रचलित व्यवस्थाका विसंगतिमाथि प्रश्न गरेका छन् र सर्वसाधारणको सुषुप्त चेतनालाई बिउँझाएका छन् । आजको जमानामा पनि शासकहरूले स्थापित गरेका मान्यतालाई चुनौती दिइराख्ने तस्लिमा नसरिन, अरुन्धती रोय, नोम चोम्स्की , रोमिला थापर, उदय प्रकाश वा अरू थुप्रै लेखक छन् जो लेखनमार्फत राजनीति गर्छन् । कुनै पनि ‘वाद’ भनेको पार्टीहरूका दस्तावेजबाहेक अरू पनि केही हो भन्ने उदाहरण नेपालकै लेखकहरूले प्रशस्तै प्रस्तुत गरेका छन् । ‘आइमाईले बोल्नु हुँदैन’ भन्ने सामाजिक मान्यतालाई व्यंग्य गरिएको कुन्ता शर्माको कविता ‘पोथी बास्नु हुँदैन’ र युगौंदेखि महिला भान्साको चौघेरामा कसरी जकडिएका छन् भन्ने वर्णन गरिएका सरिता तिवारीको कविता ‘दैनिकी’ पुरुषवादमाथिका सशक्त प्रहार हुन् ।
विजेताहरूको इतिहासको गाथाभित्र नभेटिएको आफ्नो पहिचानको निरन्तर खोजी गरिराख्ने, इतिहास निर्माणमा खर्च भएको आफ्नो समुदायको श्रमको लगातार हिसाब–किताब माग्ने राजन मुकारुङ, हाङयुग अज्ञात, भूपाल राई, चन्द्रवीर तुम्बापो, उपेन्द्र सुब्बा, राजु स्याङतानहरू एकातिर छन् । अर्कोतिर बेचबिखनको चपेटामा पर्ने तामाङ चेलीहरूको अभिशप्त कथालाई कवितामा उतार्ने बिना थिङजस्ता कवि छन् । उनीहरूको सबैको लेखन आफैंमा राजनीति हो । प्रचलित राज्य व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो ।
त्योबाहेक लेखकले कुनै राजनीतिक दस्तावेजमा आधारित ‘वाद’ समातेर सक्रिय राजनीति गर्नै नपाउने भन्ने कुनै लिखित नियम–कानुन पनि छैन । लेखक आफैंमा सार्वभौम नागरिक हो र उसलाई पनि अरू नागरिकलाई झैं सक्रिय राजनीति गर्ने अधिकार अवश्य रहन्छ । बरु नेपालमा यस्ता राजनीतिज्ञ लेखक प्रशस्तै छन् । बीपी कोइराला, मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपाल, मञ्जुलजस्ता राजनीतिज्ञ/लेखकलाई लेखनमा उनीहरूले उठाएका मुद्दाको आधारमा पनि शुद्ध राजनीतिज्ञ मान्न सकिन्छ । कुनै समय कवि कुन्ता शर्मा आफैं सक्रिय राजनीतिमा थिइन् । आजको पुस्तामा आहूतिजस्ता सक्रिय राजनीतिज्ञ छन् जो ‘गहुँगोरो अफ्रिका’ वा ‘दलन’ जस्ता कृतिहरूका माध्यमले दलितहरूका पक्षमा लेखनमार्फत पनि राजनीति गर्छन् ।
लेखनमा यदि कसैले आफ्नो वैचारिक पक्षधरता स्पष्ट उल्लेख गर्छ भने त्यो उसको वैयक्तिक अधिकार र अभियक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो । जब मान्छेको चेतनाको स्तर बढ्दै जान्छ उसले त्यहीअनुसारको लेखन बनाउँदै लैजान्छ । कुनै कविको विचारको स्तर सधैं ‘गाई हाम्री माता हुन्— गोरु हाम्रा पिता हुन्’ भन्ने स्तरका कविता लेख्नेकै रहिरहनुपर्छ भनेर उसलाई कसैले बाध्य पार्न वा नियन्त्रण गर्न खोज्नु आफैंमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।
राजनीतिकै बारेमा जर्मन साहित्यकार ब्रेक्तले भनेका छन्, ‘निरक्षरमध्येको सबैभन्दा निकृष्ट निरक्षर हो— राजनीतिक असाक्षर । ऊ सुन्दैन, बोल्दैन र राजनीतिक प्रदर्शनहरूमा कहिले भाग पनि लिंदैन । ऊ दालचामलको मूल्यबाट अनभिज्ञ रहन्छ, घरभाडाको, जुत्ता–चप्पलको, औषधिको र समग्रमा जीवनकै मूल्यबाट अनभिज्ञ रहन्छ किनकि यी सबैका मूल्य राजनीतिक निर्णयहरूले तय गर्छन् । उसको यही राजनीतिक अज्ञानका कारण नै सबैभन्दा खराब चोरहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको इसारामा नाच्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको उदय हुन्छ । र पनि मूर्खतापूर्ण गौरवका साथ छाती फुलाएर ऊ भनिनै रहन्छ— म राजनीतिलाई घृणा गर्छु ।’
'राजनीतिको वैकल्पिक प्रजाति ‘डर्टी पोलिटिक्स’
‘राजनीति डर्टी गेम’ हो भनेर कलेजअगाडिको चियापसलमा बसेर गफ ‘जोतिरहेको’ कुनै विद्यार्थीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ— आज उसले पढिरहेको कलेज भएको ठाउँमा कुनै समय घना जंगल थियो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि उसका पितापुर्खाले लडेर, मरेर शिक्षा प्राप्त गर्ने हक शासकहरूको हातबाट खोसेर आफूमा ल्याए । राजनीति गरे, नारा लगाए र उनीहरूलाई शिक्षण संस्था खोल्न बाध्य पारे । कलेजमा छात्रवृत्ति पाएकाले शिक्षण शुल्क तिर्न नपरेको पैसालाई चियापसलमा धूवाँ बनाएर उडाइरहेको उसलाई यो पनि थाहा नहुन सक्छ उसले पाएको छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालयदेखि कलेज हुँदै ऊसम्म आइपुगेको छ जुन शिक्षा मन्त्रालयलाई राजनीतिले नै चलाउँछ । ‘लेखनमा राजनीति’ गरेकाहरूको कटाक्ष गर्दै तेजोबध गरेका ट्वीटले सय नाघेर ‘हन्ड्रेड आरटी क्लब’ को गर्विलो सदस्य बनेको कुनै ‘फुल टाइम’ लेखकलाई आज यो थाहा नहुन पनि सक्छ— कथंकदाचित भोलि मृगौला फेल वा क्यान्सरजस्ता खर्चिला बिमारले ग्रस्त बनेमा ‘जीवनभर लेखेर देश सेवा गरेका व्यक्तिलाई बचाऔं’ भन्दै उनै कटाक्ष पीडितहरू नाराले जलप गरिएका सयौं कविता लेखेर उसैका लागि राजनीति गर्नेछन्— सरकारलाई दबाब दिनका लागि जुन सरकार राजनीतिमार्फत नै चल्छ ।
‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ जस्ता जुरुक्कै उचाल्ने गीत लेख्ने गोपालप्रसाद रिमाल अन्तत: मानसिक असन्तुलनका कारण उठ्नै नसक्ने गरी अस्वस्थ भए । ‘मकैको खेती’ लेखेबापत सुब्बा कृष्णलाल जेल परे, यातना पाए र जेलभित्रै उनको चोला उठयो । तर आफ्ना कृतिमार्फत उनीहरूले गरेको राजनीति र त्यसबापत आएको व्यवस्था परिवर्तनको फाइदा सबैले उठाए । दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा प्रकट रूपमा वा विचारमार्फत कहिले राजनीति गर्न नसक्ने, भित्रभित्रै अनेकखाले ‘राजनीतिक’ भने तिकडम गरिरहने, खुलेर व्यवस्थाको विरोध गर्न नसक्ने तर व्यवस्था परिवर्तनमार्फत आएको अनुकूलनको फाइदा उठाउन सधैं अग्रपंक्तिमा रहनेहरूको जमात इतिहासका हरेक कालखण्डमा रहयो । अफसोस ! ‘वाङमयिक योगदान पुर्‍याएबापत’ भन्दै चुनाव चिन्हका आधारमा प्रदान गरिने राजनीतिक नियुक्तिका लागि सधैं ‘ओपन’ रहने र विचारमार्फत लेखनमा राजनीति गर्नेहरूलाई सधैंभरि लज्जित गरिरहने प्रवृत्तिलाई सुशोभित गर्न ‘डर्टी पोलिटिक्स’ बाहेक अर्को नाम म फेलै पार्दिनँ ।
फ्रान्सेली प्रगतिशीलता, जर्मन पाइपर र नेपाली मुसा
इतिहासमा पढेको— फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहाँको सदनमा प्रगतिशील विचारधारा राख्ने सांसदहरू सदनको बायाँतर्फ बस्न थाले । यसैकारण उनीहरूलाई वामपन्थी वा ‘लेफ्टिस्ट’ भन्न थालियो । यही क्रम संसारभर चल्दै आयो । त्यही परम्पराअनुसार वामपन्थलाई आधार बनाएर लेख्न सुरु गरेका लेखकहरूलाई प्रगतिशील लेखक भन्न थालिएको होला । अर्थात् स्वाभाविक रूपमा उनै लेखकहरू ‘प्रगतिशील’ बने जो वामपन्थी विचारधारा राख्छन् ।
नेपालमा पनि वर्षौंदेखि प्रगतिशील लेखनकै धार समातेर हिंडेका अग्रज लेखकहरूको एक हूल छ र उनीहरूकै दौराको फेर समातेर हिंडिरहेका अनुजहरूको अर्को जमात पनि । अर्को प्रसंग— जर्मनीको लोककथा छ पाइड पाइपर र मुसाको । सहरभरि मुसा र प्लेगको आतंकले ग्रसित हयामलिन सहरका बासिन्दाले एक जना पाइप (एक प्रकारको बाजा) बजाउनेलाई भेट्छन् । उसले सहरका सबै मुसालाई सहरबाहिर पुर्‍याइदिन सक्ने आश्वासन दिन्छ । सहरबासीसँगको मोलमोलाइपछि पाइपरले पाइप बजाउँदै सहर घुम्छ, मुसाहरू लठ्ठिंदै उसको पछि लाग्छन् । अन्तत: उसले सबै मुसालाई सहरबाहिर लगेर फालिदिन्छ । एकातिर प्रगतिशील लेखनलाई नै आधार बनाएर लेखिरहेका समकालीन साथीहरूको आँखामा हेर्छ, लेखनमार्फत नै दुनियालाई ‘अपसाइड डाउन’ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास देख्छु । अर्कातिर प्रगतिशील वा वामपन्थी लेखनमा आधारित रहेर वर्षौं लेखिसकेपछि अहिले त्यही लेखनको ‘ब्याज’ खाइरहेका अग्रजहरू भन्छन्, ‘आजकालकाहरू नारा लेख्छन् ।’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा लामो लडाइँ लडिएको नेपालजस्तो देशमा ‘लेखनमा राजनीति गर्‍यो, नारा लेख्यो’ भनेर कसैको वैचारिक लडाइँलाई बारम्बार हतोत्साही गर्न ‘डर्टी पोलिटिसियन’ हरूको जमात त पहिल्यै छँदै थियो । ‘जीवनभर यस्तै लेख्नुपर्छ’ भनेर आफ्नो पछिपछि लाग्न आफैंले प्रेरित गरेका ‘अनुज प्रगतिशील’ हरूलाई जब कुनै भूतपूर्व ‘अग्रज प्रगतिशील’ ले पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘तिमीहरू कवितामा नारा लेख्छौ’ वा ‘लेखनमा राजनीति गर्छौ’ जस्ता टिप्पणी गर्छन्, त्यति बेला ठयाक्कै पाइड पाइपर र मुसाको जर्मन कथा याद आउँछ । लाग्छ अग्रजहरू पाइपर हुन् र अनुजहरू मुसा ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७३ १३:४८